Iwo Maviri Mabhuku Anotarisana naJose María Guelbenzu | Zvazvino Zvinyorwa
Guelbenzu: Hupenyu hweKushuvira Zvinyorwa
Guelbenzu achazonyora inova mutikitivha neruoko rwemumwe wayo protagonist, Mariana de Marco, chero bedzi achiramba achimudaidza kuti anyore. Anoreurura kuti haana chaanofarira pamhando iyi kupfuura iyo yehunhu wekutonga kwaMarco Nenharidzano yekutanga yemanovhisi gumi akateedzana, yakaburitswa masere, kubva kwekutanga, Usashungurudza Mhondi muna 2001 kusvika kwekupedzisira, A Disconsolate Mhondi, muna 2017. Zvichida varavi vayo vanoshingairira tichava nechikamu chechipfumbamwe. mumaoko edu mu2019.
Guelbenzu ndiyo inoshanda sampu yehupenyu hwakatsaurirwa kumabhuku. Pazera ramakore makumi manomwe nematatu, Jose María Guelbenzu anoenderera mberi nekuzvipira kune rudo rwake rukuru nechidakadaka chimwechete sepaya paakatanga uye akatobata zvese zvinyorwa uye hapana kana achipfuura: Munyika yekutsikisa, se mupepeti wenhau Taurus kwemakore gumi nerimwe uye Alfaguara kwemakore matanhatu. Mukutsoropodza kwemanyoro, kubva pamakore ekutanga ebasa rake rehunyanzvi uye anoenderera mberi nekoramu yake muBabelia, iyo yeCulture yekuwedzera yeNyika.
Muzvinafundo kuUniversity uye mumakosi akasiyana evanyori vatsva kufadza avo vakamirira kirasi yavo nekugadzirisa kwavo nechido kubva pavanosiya yekupedzisira, nekuti anokwanisa kufambisa ruzivo rwake uye kuita neiri basa kupfuura mazwi ake.
Mubasa rake guru, iro remunyori, akazviratidza zvitaera zvakasiyana. Makore mazhinji apfuura kubvira bhuku rake rekutanga, ra nhetembo, Hispano-American Notebooks. Neraki kune vanoda mutikitivha novel, iyo isiri nhema, nekuti iye munyori haafarire kuti nhevedzano yake pamusoro pemutongi ari kuongorora Mariana de Marco yakarongedzwa nenzira iyoyo, haana kuramba achiteedzera nhetembo uye akasvetuka novel. Hapana cheiyo nhema mhando, nekuti izvo zvakaitwa kuti zvimirire, makore mazhinji angadai achatofanira kupfuura kuti Guelbenzu asvike pasi renyonganiso.
Pakati penhetembo neruzivo rwemutikitivha, enganonyorwa dzakanaka kwazvo dzakasiyana kubva kune mumwe nemumwe, nechinobatanidza chinongedzo chekuve kwakadzama kwekuratidzira kwemadingindira akanangana nemunhu. Nebhuku rake rekutanga El Mercurio, rakaburitswa muna 1968, akahwina mubairo wekutanga, uyo wekupedzisira weiyo Pfupi Library Mubairo, iyo ichatungamira runyorwa rurefu, kwatingawane kubva kuCritics Award yeCastilian Narrative kuenda kuTorrente Ballester kuburikidza ne International Mubairo waNovela Plaza & Janés uye vakaramba vachikohwa mibairo mugore rapfuura 2017. Mumwe chete wavo, Torrente Ballester, kune imwe yenhau dzevatema dzakateerana: Mukoma mukoma.
Mune rake renhau rekutanga Guelbenzu anotsanangura chichava mutsetse unodzokororwa mune rake rese basa. Mariri anoongorora nzanga yeMadrid yenguva iyoyo achishandisa semota boka revadzidzi vadiki venguva, Un peso en el Mundo, kubva pagore 99 kwaanotaura nezve kukosha kwekudarika, kuti awane huremu hwake munyika mukadzi muhafu yehupenyu hwake zvinopesana neizvo zvemudzidzisi wake wekare uyo padanho repamberi pehupenyu akatodzoka kubva pakurwadziwa ikoko.
Kubva panguva iyoyo, Guelbenzu anotsvaga, kusvika pakufadza kwevadi vemhando iyi, mune yekuparwa kwemhosva, pamwe nekuburitswa kwe Usashungurudze mhondi Muna 2001, kunyangwe asina kusiya mutsetse wake wekare, akangoiisa nzvimbo, achiburitsa mamwe mashanu emanoveli anoridza Mariana de Marco kesi dzakateedzana: Musoro weakarara (2003), Rusvingo urwu rwechando (2005), Rudo rwechokwadi (2010), Yakagamuchirwa nhema (2013), Vane simba vanozvida zvese (2016) apo, uchitevera mutsetse wakavhurika ne Un peso en el mundo, Inobata kubva kuhuwori hwenzvimbo yakazvimba senge iriko yazvino kusvika pakusava nemweya, kwehunhu hwatinoshandisa nguva yedu munyika kune rudo rwevanhu vaviri muhupenyu hwese pamwechete uye, pakupedzisira, zvinoreva kuvapo kwedu, nguva dzose kubva pakudarika, kwakanakisa uye zvekare, kwavanoonekwa kubva kune vatambi vanotengesa mweya yavo kuna dhiabhoni kuti vatize kubva murufu kuenda iko kutenderera kwemweya wemunhu akafa uyo murume wechikepe anobatsira kuyambuka kuenda kuHumambo hweRufu.
G… iko zvino kuenda kwaMariana de Marco
Ipo izvi zvese zvaiitika mumitsara yeGuelbenzu, Mariana de Marco akagadzirisa dzimwe nyaya nomwe mumaoko emunyori wadzo, zvaisanganisira zvisere kubva pane yekutanga. Guelbenzu anokwanisa kunyora rimwe gore kushoropodza uye kufunga pamusoro pechizvarwa chake uye kushomeka kwemazano uye kudzika kwenzanga yavakavaka uye gore rinotevera anotinunura nyaya nyowani ine muto kubva muruoko rwevatongi vaanofarira. Yakawanda zvakadii iyo yakadzika yemagariro yenhau naGuelbenzu arimo mune Mariana de Marco akateedzana? Chii chinotariswa nemutongi anoferefeta kutsvaga chokwadi chinoratidza pamwe nekukwezva kune njodzi nevanhu, kunyanya varume, nerinopfuura rima divi? Zvichida mitsara yake yekunyora iri kushoma kure kunyangwe sezvainoita sekutanga uye ingori nzira dzakasiyana, dzinoongorora nyaya dzine chekuita nemunyori, asi zviite pamatanho akasiyana ekudzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Zviso zvaJose María Guelbenzu
Simon Beckett uye yake nhema nhevedzano neye forensic anthropologist David Hunter.
"Kufa handizvo zvinonyanya kurwadza" naInés Plana anoenderera achitengesa